Sharciga cusub oo lasoo saaray ayaa xukun dil ah ka dhigay kufsiga - BBC News Somali
Sharciga cusub oo lasoo saaray ayaa xukun dil ah ka dhigay kufsiga
Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Hindiya ayaa isniintii la soo dhaafay ansixiyay hindise-sharciyeed dil ku xukumayo qof kastaa oo lagu helo dambi ah in uu kufsaday gabar da'deeda ka yar tahay 12 sano.
Baarlamaanka dalkaasi ayaa isbadal ku sameeyay xeerka ka hortagga dambiyada kufsiga ee ka dhanka ah gabdhaha yaryar. Meelmarinta sharcigan cusub ayaa waxaa codsaday wasiirka horumarinta haweenka iyo carruurta ee dalkaasi India, Maneka Gandhi, oo sheegtay in ay rumeysan tahay in sharcigani uu horseedayo in laga hortago tacaddiyada dhanka galmada ah ee ka dhanka ah carruurta.
Sharcigan ayaa waxaa soo dedejiyay dhawr dhacdo oo carruur lagu faraxumeeyay qeybo ka mid ah dalkaasi, waxaana ka mid ah kufsi iyo dil dhawaan loo geystay gabar yar oo siddeed sano jir ah oo ka dhacay Kashmiirta ay India maamusho iyo kufsigii ugu dambeeyay oo gabar yar loogu geystay gobolka Madhya Pradesh ee bartamaha dalkaasi.
Kufsiyada ka dhanka ah carruurta ee ka dhaca dalkaasi India ayaa kordhay sanadkii 2016, waxaana dhacay ilaa19,765 kiis oo kufsi ah, halka sanadkii 2012 uu ka ahaa 8,541.
Hindi: 17 nin oo lagu soo oogay kufsi ay u geysteen gabar yar oo 11 jir ah
Dowladda dalkaasi ayaa sanadkii 2013 waxa ay sheegtay in dil ay muteysanayaan dadka geysta kufsiyada sababa dhimashada. Arrintan ayaa timid kaddib markii uu buuq ka dhashay kufsi iyo dil magaalada caasimadda ah ee Delhi loogu geystay gabar ardayad ahayd oo baraneysay caafimaadka.
Sharcigan cusub ayaa maxkamadaha u ogolaanaya in ay dil ku xukumaan qof kastaa oo kufsi u geysta gabar ka yar 12 sano, xitaa haddii asyan u dhiman kufsigaasi.
Inkastoo uu jiro sharcigan, haddana dalkaasi India waxa uu ka gaca jiidayaa fulinta xukunkaasi dilka ahi, waxaana dilkii ugu dambeeyay la fuliyay sanadkii 2015.
Inkastoo dad badan ay aad u soo dhaweeyeen sharcigan cusub, haddana waxaa sharcigan dhaliilsan dadka u ololeya xaquuqul insaanka, kuwaasi oo shaki gelinaya suurtagalnimada in arrintani ay horseedi doonto in la cirib tiro kufsiga ka dhanka ah carruurta.
Su'aasha ah xukunka dilka ah ee lagu xukumayo dadka kufsiga geysta in uu mirodhal yahay iyo in kale ayaa ah mid dunida oo dhan aad looga doodayo, waxaana tusaale mar kastaa loo soo qaataa waddamada deriska ah oo xukunkaasi uu ka jiro balse wali kufsiga aan xal loo helin.
Xukunka dilka ah ayaa caqabad ku ah caddaaladda?
Waddamada Pakistan, Bangladesh iyo Afqaanistaan ayaa dhammaantood waxa ay dil ku xukumaan dadka kufsiga geysta, waxaana dadka reer India ee ka soo horjeeda kufsiga ay inta badan tusaale u soo qaataan waddamadani. Waxaana inta badan la sheegaa in kufsigu uu aad ugu yar yahay waddamadani balse xaaladdu ma tahay sida la moodayo?.
Khubarada ku takhasusay arrimaha gobolka ayaa sheegaya in xukunnada dilka ahi ee lagu xukumo dadka lagu helay dambiyada kufsiga ay adag tahay in lagu fuliyo xukunkaasi.
"Xitaa haddii sharcigani uu kufsiga la mid dhigayo argagixisada, ilaa iminka wax isbadalay ma jiraan. Kufsiga ayaa sii kordhaya oo kaliya halka in xukun lagu rido eedeysaneyaasha dambiyada kufsiga lagu helay uu sii yaraanayo," ayay tiri Seynab Maalik, oo ka tirsan hay'adda Justice Project Pakistan oo ka hawlgasha gobolka Lahoor.
Waxa ay sheegtay in arrintani ay sabab u tahay "booliska oo ka xagliya dumarka, mararka qaarna kaba caga jiidaya in ay diiwaan geliyaan kufsiga loo geysto dumarka, iyaga oo og in arrintaasi lagu muteysan karo dil, gaar ahaanna haddii kufsigaasi ay ku lug leeyihiin rag badan. Si dilkaa looga badbaadana, kiiska ayaa lagu qoraa hal nin oo kaliya.
Hawlwadeennada u ololeeya dhibbanayasha kufsiga ayaa sheegaya in boolisku ay inta badan dhex dhexaadiyaan eedeysanaha iyo qoyska gabadha kufsiga lagula kacay, arrintaa oo sida ay sheegaan dhiirigelisa ragga kufsiga geysta.
Arrintan ayaa sidoo kale, aad looga hadal hayaa dalka Bangladesh, halkaasi oo baarlamaanka uu sanadkii 1995 uu meel mariray sharci lagu ciqaabayo dadka kufsiga geysta iyo xitaa kuwa tahriibiya carruurta.
Tan kale, inta badan waxaa dhacda in eedeysaneyaasha kufsiga loo haysto lagu waayo caddeymo oo ay xorriyaddooda dib u helaan, maadaama aysan jirin xukun kale oo aan ka hayn in dil lagu xukumo.
Dhibaato hor leh
Arrintan ayaa ah midda ay cuskadaan inta badan hawlwadeennada reer India ee dhaliilsan xukunka dilka ahi ee lagu xukumo ragga kufsiga u geysta dumarka.
"Dhibaatada ayaa waxa ay tahay in dhibbanayaasha kufsiga oo inta badan aanan soo sheegin kufsiga loo geysto, sababtoo ah dadka kufsigani geysanaya ayaa inta badan ah kuwo aqoon u hel dhibbanaha ay kufsanayaan, waxaana jiraya arrimo badan oo fududeynaya in dhibbanahaasi iyo qoyskiisuba aysan kufsigaasi ku wargelin booliska," ayuu yiri Dr Anup Surendranath, oo ah madaxa mashruuca 39A, oo ah ay waddo hay'ad u ololeysa arrimaha caddaaladda.
Waxa uu intaasi ku daray in "marka la eego xaaladdaasi uu xukunka dilka ahi dhibaato ku yahay xal u helidda kufsiga, maadaama dhibbaneyaashu ay ku adkaaneyso in qof ay aqoon fiican u leeyihiin ay arkaan isaga oo dil lagu xukumayo."
Arrinta kale ayaa ah takoorka la takooro gabdhaha kufsiga lagula kacay, gaar ahaanna dhulka miyiga ahi, taa oo ka dhigan in ay adkaaneyso in gabdhahaasi ay dhibkooda booliska u sheegtaan, xitaa iyaga oo og in uu jiro sharci adag oo dil uu muteysanayo qofka kufsiga geystay.
Dalka India ayaa isbadal weyn ku sameeyay sharcigiisa si loola xisaabtamo askarta booliska ahi ee ku hawlan la tacaalidda tacaddiyada ka dhanka ah dumarka, arrintaa oo miro dhal noqotay.
Balse isbadalkaasi wali wax weyn ma soo kordhin, waxaana daraasaadka la sameeyay ay muujinayaan in kufsiga uu sii kordhayo.
Maxamad Muusa Maxmuudi, oo ah agaasimaha guddiga madaxa bannaan ee xaquuqul insaanka ayaa sheegay in xukunka dilka ahi uusan xal u ahayn kufsiga, waxa uuna dumarka ku dhiirigeliyay in ay caddaalad dalbadaan.
Warbixin saandkii 2012 hay'adda xaquuqul insaanka ee Human Rights Watch ay ka soo saartay dalka Afqaanistaan ayaa lagu sheegay in "halkii ay taageero ka raadsan lahaayeen booliska, waaxda garsoorka iyo dowladda, ay dumarka la kulmaan ciqaab, iyadoo lagu ceebeeyo wixii ku dhacay."
'Caddaaladda oo soo daahda'
Hannaanka gaabiska ah ee caddaaladda dalkaasi India ayaa ah arrin sidoo kale walaac laga muujinayo. Kiisaska qaar ayaa qaata wakhti aad u dheer, taa oo ka dhigan in dhibbaneyaashu ay muddo dheer sugaan in ay helaan caddaalad.
Xitaa haddii xukun lagu fuliyo qof geystay kufsi, waxaa aad ugu fudud in uu xukunkaasi racfaan ka qaato, taa oo keeneysa in dacwaddu ay qaadato sanaddo badan.
Waxaana xalka kaliya loo arkaa in boolisku, waaxda garsoorka iyo laamaha kala geddisan ee dowladda ay si sax ah u gutaan waajibaadkooda.
Shimbirta ugu cimri dheeri imisay jirtaa?